သင်၏နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်အစားအစာလမ်းညွှန် - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » နှလုံးရောဂါ » သင်၏နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်အစားအစာလမ်းညွှန်
ရေးသားသူ Dr. Sandar Lin ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe.
နှလုံးနှင့် သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများမှ ကာကွယ်ရန်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းသိပ္ပံ၊ အစာအာဟာရစသော နေထိုင်မှုပုံစံများ လိုအပ်ပါသည်။ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အစာအာဟာရသည် နှလုံးကို ကျန်းမာအောင် ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်မည့်အန္တရာယ်ကို လျော့ချပေးသည့်အပြင် နှလုံးနှင့် သွေးကြောရောဂါများအတွက် အဓိကဗဟိုကျသော ကုသမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ကျန်းမာသောနှလုံးတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက် သင်၏နေ့စဉ်အာဟာရတွင် ပါဝင်သင့်သည့်အစားအစာများကို ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြသွားမည်။
နှံစားပင်တို့၏ အစေ့အဆန်များသည် အမျှင်နှင့်အာဟာရဓာတ်များကြွယ်ဝပြီး သွေးဖိအားနှင့်နှလုံးရောဂါတို့ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ထိန်းပေးပြီး
သွေးလွှတ်ကြောများပိတ်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးသည်။ ကိုလတ်စထရော (သွေးတွင်းအဆီဓာတ်) ကျစေရန် အစားအစာများတွင် အစေ့အဆန်မျိုးစုံကို တွဲဖက်စားသောက်ပေးပါ။ ဆန်လုံးညို၊ ဘာလီ၊ ပန်းဂျုံ၊ ပြောင်း၊ အုတ်ဂျုံ စသော အစေ့အဆန်များကို စားသုံးသင့်သည်။
အိုမီဂါသရီးသည် ရောင်ရမ်းခြင်းကို ကျစေသည့်အပြင် ကိုလက်စထရောကိုလည်း ကျစေပြီး သွေးကြောများပိတ်ခြင်း၊ သွေးကြောများမာကြောခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးကာ သွေးပေါင်ကိုကျစေ၍ နှလုံးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးသည်။ အိုမီဂါသရီးပါဝင်သော အစားအစာများမှာ ပုစွန်၊ တူနာငါး၊ ဂုံး၊ ပင်လယ်ငါးကြီး၊ ဆယ်လမွန်ငါးစသော ပင်လယ်စာများ၊ သစ်ကြားသီး၊ ပဲပုပ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီနှင့် ရွှေဖရုံသီး စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းတွင် သတ်သတ်လွတ်စားသူများအတွက် အလွန်ကောင်းသော ပရိုတိန်းဓာတ်များပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် အရိုးဖြစ်ပေါ်မှုအတွက်
ကောင်းမွန်သော ဗီတာမင် ‘ကေ’ လည်းပါဝင်သည်။ အမျှင်ဓာတ်လည်း ကြွယ်ဝသောကြောင့် ကိုလက်စထရောနှင့် သွေးဖိအားကိုလည်း ကျစေသည်။
သလဲသီးတွင် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကြွယ်ဝသဖြင့် သွေးလွှတ်ကြောနံရံများကို ကောင်းမွန်စေသည်။ သလဲသီးသည် အထူးသဖြင့် နှလုံးအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းတွင် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ခြင်းကိုကျေးဇူးတင်ရပေမည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် သလဲသီးသည်
သွေးလွှတ်ကြောများတွင် သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းစေရန် နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ကို ထုတ်ပေးသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအနေနှင့် နေ့စဉ် အယ်လ်မွန်သီး ၃ဝဝ ဂရမ်ခန့်စားပေးပါက သွေးတွင်းအဆီဓာတ်ကို ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းထိ
လျော့ကျစေသည်။ အယ်လ်မွန်သီးသည် စွမ်းအင်ကြွယ်ဝသော အသီးခြောက်ဖြစ်သည်။ အယ်လ်မွန်သီးတွင် သွေးကြောမာခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်သော ဗီတာမင် ‘အီး’ နှင့် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ အမြောက်အများပါဝင်သောကြောင့် နှလုံးအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ ထို့ပြင်အရိုးနှင့် သွားများအတွက် ကောင်းမွန်သော ကယ်လ်ဆီယံဓာတ်လည်း များစွာပါဝင်သည်။
အချို့သောလေ့လာမှုများအရအစားအစာထဲတွင်ကယ်လ်ဆီယံနှင့်ပိုတက်ဆီယံမျှတစွာပါဝင်ပါကသွေးတိုးရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။သဘာဝဒိန်ချဉ်တွင်ဤပစ္စည်းများများစွာပါဝင်သည်။ဒိန်ချဉ်ကိုနေ့စဉ်နံနက်စာ (သို့) အချိုပွဲအဖြစ်စားပါ။အစာစားပြီးချိန်တွင်ကိတ်မုန့်များ၊ယိုများအစားဒိန်ချဉ်ကိုစားပေးပါကကိုယ်အလေးချိန်ကျစေရန်ထိရောက်စွာကူညီပေးသည်။
လိမ္မော်သီးသည် ဗီတာမင်’စီ’ကြွယ်ဝသောကြောင့် အးမိဖျားနာခြင်းကိုခုခံနိုင်သည်။ ဤအသီးသည် နှလုံးရောဂါကိုလည်း တိုက်ထုတ်နိုင်သည်။ လိမ္မော်သီးတွင် အမျှင်ဓာတ် (အထူးသဖြင့်ပက်တင် (Pectin)) မြင့်မားစွာပါဝင်သဖြင့် သွေးတွင်း ကိုလက်စထရောကိုကျစေသည်။ ဗီတာမင် စီသည် သွေးကြောနံရံများကို သန်မာစေပြီး သွေးကြောတွင်း သွေးအိုင်ခြင်းကို လျော့ကျစေသည်။ လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်သည် သွေးကြောများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
ဤဆီသည် မပြည့်ဝဆီများကြွယ်ဝသဖြင့် သွေးကြောများအတွက် အထူးကောင်းမွန်သည်။ သံလွင်ဆီသည် သွေးတွင်းကိုလက်စထရောတက်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး သွေးဖိအားများခြင်း (သွေးတိုးခြင်း)ကိုလည်း လျော့ကျစေသည်။ သံလွင်ဆီတွင်ပါဝင်သော မပြည့်ဝဆီများသည် ထောပတ်သီးနှင့် အခြားအခွံမာသီးများတွင်လည်း ပါဝင်သည်။ သို့သော် သွေးကြောနံရံများကို ကိုလတ်စထရောများထိုးဖောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသော ပိုလီဖီနာပစ္စည်းများ (polyphenol substances) ကို သံလွင်ဆီကသာ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
သွေးကြောမာခြင်းဆိုသည်မှာ သွေးကြောများရောင်ရမ်းပြီး မာကြောလာခြင်းဖြစ်သည်။ နနွင်းတက်သည် ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဆန့်ကျင်သည့်ဂုဏ်သတ္တိရှိသည်။ ဟင်းခတ်အမွှေးကြိုင်များတွ င်နှလုံးနှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကို လျော့ကျစေသော အကျိုးအာနိသင်ရှိသည်။ နနွင်းတက်တွင်တွေ့ရသော ကာကူမင်ဓာတ် (Curcumin) သည် ခြေလက်များကို စီးဆင်းသောသွေးကြောများရောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့ကျစေသည်။
ထို့ပြ င်နှလုံးကိုကျန်းမာစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် သင့်တင်လျောက်ပတ်သော အစားအစာများစာရန်လိုအပ်ပြီး ဆားများ၊ သကြားများနှင့် ပြည့်ဝဆီများကို အလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းမှေ ရှာင်ကြဉ်ရပါမည်။
Top 11 Heart-Healthy Foods, http://www.webmd.com/food-recipes/features/11-top-heart-healthy-foods#1, Accessed October 5th, 2016.
10 Best Foods for Your Heart, http://www.health.com/health/gallery/0,,20307113,00.html, Accessed October 5th, 2016.
သင့်ကလေး သွေးပေါင်ကျခြင်း နှင့် ပတ်သက်ပြီးသိစရာအချက်များ
မိုးရာသီမှာ သတိထားရမယ့် စားသောက်ပုံအာဟာရ
ကလေးငယ်များတွင် မူးဝေခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သော အကြောင်းများ